Aung's Investment: MA
Technical Analysisမှာ အရိုးရှင်းဆုံး၊ ရှေးအကျဆုံး နဲ့ one of the most effective methodsဖြစ်တဲ့ နည်းတစ်ခုအကြောင်း ဒီPostမှာ ပြောပြပါမယ်။ အဲဒါကတော့ Moving Average (MA)လို့ ခေါ်ပါတယ်။ MAမှာ Subcategory အဓိကနှစ်မျိုးရှိတယ်။ Simple MA နဲ့ Exponential MAလို့ ခေါ်တယ်။ MAရဲ့ အဓိက အသုံးဝင်ပုံကတော့ Trendတစ်ခုဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက်အပိုင်းအခြားတစ်ခုရဲ့ average priceရဲ့ အပေါ်မှာရှိလား၊ အောက်မှာရှိလား ဆိုပြီး ဆန်းစစ်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ MAကို တွက်တဲ့အခါမှာ ဘယ်နှစ်ရက်ပေါ်မှာ တွက်လည်းက အရေးကြီးသလို ဘယ်လို MAလည်း ဆိုတာကလည်း ထည့်စဉ်းစားရပါမယ်။ Formulaကတော့ ရှင်းပါတယ်။ Sum of Prices / No. of Daysပေါ့။
Simple MA (SMA)ကို တွက်တဲ့နေရာမှာ အပေါ်က Formulaအတိုင်းတွက်လို့ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူ့ကို Simpleလို့ ခေါ်တာပေါ့။ Priceလို့ပြောပေမယ့် Priceဟာ သုံးမျိုးဖြစ်နိုင်တာကိုလည်း သိသင့်ပါတယ် - High, Low, Close. Openကရှိပေမယ့် သိပ်သုံးလေ့မရှိသလို တကယ် ၉၉%အသုံးခံရတာကတော့ Closeပါ။ ဥပမာ SMA10 လို့ပြောရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ရက်အတွင်းမှာပိတ်ခဲ့တဲ့ Closeတွေကို ပေါင်းပြီး ၁၀နဲ့စားထားတာလို့ သိရပါမယ်။
Exponential MA(EMA)ကို တွက်တာကတော့ နည်းနည်း ပိုရှုပ်တယ်။ အသေးစိတ်သိချင်သပါ့ဆိုရင်တော့ googleသာလုပ်ကြည့်ပေတော့။ အဓိကသိဖို့က EMAဟာ Most Recent Priceတွေကို ပိုပြီး Weightပိုပေးပြီး တွက်တယ်လို့ နားလည်ထားရင် လုံလောက်ပါတယ်။ မနက်ဖြန်ဖြစ်မယ့် Priceဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လကဈေးထက် ဒီနေ့၊ မနေ့က ဈေးပေါ်မှာ ပိုပြီးDependဖြစ်တယ်ပြောရင် မလွန်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Proအများစုဟာ EMAကို ပိုကြိုက်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း EMAပဲ အသုံးများပါတယ်။
Dow Jones Industrial (DJI) indexကို အောက်မှာ EMA10နဲ့ ကျွန်တော်ပြထားပါတယ်။ အစိမ်းလိုင်းက EMA10ပါ။ လိုက်ကြည့်ရမှာက တစ်Barချင်းစီရဲ့ Closeနဲ့ EMA10ကို လိုက်ယှဉ်ကြည့်ရပါမယ်။ Closeဟာ EMA10ရဲ့ အပေါ်မှာ ရှိနေသ၍ Short-term uptrendဟာ အခြေအနေကောင်းတယ်လို့ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ အောက်ရောက်သွားရင်တော့ စသတိထားရပါမယ်။ သုံးရက်လောက်စောင့်ကြည့်ပြီး တခြားTechnical Indicatorတွေကပါ Bearish Signalတွေ ပြနေရင်တော့ ရောင်းဖို့Readyလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
MAတွေရဲ့ No. of daysဟာ တိုရင်တိုသလောက် Recent Price Activityနဲ့ Matchingဖြစ်ပြီး ရှည်ရင်ရှည်သလောက် Recent Priceတွေနဲ့ ကွာဟနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် EMA15လောက်အထိကို Short-term MAလို့ ခေါ်ပြီး 15ထက်ကြီးတဲ့ MAတွေကိုတော့ Medium to Long-term trendတွေလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ Short-term EMAတွေဟာ Tradersတွေအတွက် အရေးကြီးသလို Long-term EMAတွေဟာ Investorsတွေအတွက် သတိထားကြည့်နေရမယ့် Technical Indicatorတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Short-termနဲ့ Long-termကို ပေါင်းပြီးသုံးရင် အဲဒီ့ Groupနှစ်မျိုး (Traders & Investors)တွေရဲ့ Overall Sentimentကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ Short-termဟာ Long-termပေါ်မှာ ရှိနေသ၍ Uptrendရဲ့ Momentumကောင်းတယ်လို့ ပြောနိုင်သလို အောက်မှာရှိရင်လည်း Downtrendဟာ အားကောင်းနေဆဲလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံး Conceptကတော့ MA Crossoversတွေပါ။ Shortဟာ Longအောက်မှာရှိနေခဲ့တာကနေ ဦးထောင်လာပြီး Longကို တဖြည်းဖြည်း စဖြတ်နေပြီဆိုရင် Downtrendဟာ Reversal ဖြစ်တော့မယ့် အခြေအနေဆိုပြီး ဝယ်ဖို့စောင့်ကြည့်နေရပါမယ်။ Reverseတွေးရင် Shortဟာ Longပေါ်မှာ ရှိနေခဲ့တာကနေ အားမရှိတော့ပဲ စပြီး Downward directionနဲ့ ဖြတ်နေပြီဆိုရင်လည်း ရောင်းဖို့ ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။
အရေးကြီးတဲ့ MA valueတွေကတော့ EMA30 (six trading weeks), EMA60 (12 trading weeks), EMA100, EMA200 တို့ပါပဲ။ Closeတွေဟာ EMA100 နဲ့ EMA200အောက်စရောက်ပြီဆိုရင် Investorတွေကိုယ်တိုင် ချရောင်းနေပြီလို့ သဘောပေါက်ရပါမယ်။ EMA200အောက်ရောက်ရင် Marketလည်း တော်တော်လေး လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်နေပြီးလောက်ပါပြီ။ အောက်မှာ DJIရဲ့ EMA10နဲ့ 30ရဲ့ Crossoverတွေကို ကြည့်ကြည့်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ Aprilက EMA crossoverကို Signalယူခဲ့တဲ့သူဟာ အခုလောက်ဆိုရင် တွေးသာကြည့်ပေတော့။ ဒီလိုပဲ 2009 Januaryက Bearish Crossoverနဲ့ ရောင်းခဲ့တဲ့သူဟာလည်း အကျဘယ်လောက် သက်သာခဲ့မလည်းဆိုတာကြည့်ရင် MAတွေရဲ့ Powerကို သဘောပေါက်လောက်ပါပြီ။ နောက် Postတွေမှာ MAတွေကနေ Deriveလုပ်ထားတဲ့ ပိုပြီး Advancedဖြစ်တဲ့ Technical Indicatorတွေအကြောင်း ပြောသွားပါမယ်။
Posted by Aung Myo Htet at 3/05/2010 02:29:00 PM
Labels: Crossover, EMA, methods, moving average, Signal, technical analysis